Changyuan Aluminum fence/railing with welding is one of the normal fence in our factory. ဒါဟာလှေကားရထားလမ်းနှင့်လသာဆောင်ရထားလမ်းများအတွက်အထူးဖြစ်ပါတယ်. အလူမီနီယမ်အလွိုင်း guardrail ဆေးသုတ်ခြင်းနှင့်ထိန်းသိမ်းထားရန်မလိုအပ်ပါ. ဒီဟာဟောင်းနေတယ်, which saves you the fatigue and trouble of maintenance, and has the lowest comprehensive cost.
Handrail(မီလီမီတာ) 80*40*1.5 Deformed Tube
Post(မီလီမီတာ) 50*50*1.2 Square Tube 40*40*1.2 Square Tube
Rail(မီလီမီတာ) 40*40*1.2 Square Tube 40*40*1.0 Square Tube
Picket(မီလီမီတာ) 19*19*1.0 Square Tube 16*16*1.0 Square Tube
မျက်နှာပြင်ကုသမှု Mill finished; Anodized; Powder coated; Wooden grain; Electrophoresis; Heat transfer printing
စျေးနှုန်း South China Metal Exchange/LME Primary aluminum price + အများဆုံးအပြိုင်အဆိုင်ပြောင်းလဲခြင်းကုန်ကျစရိတ်
Mould policy ဝယ်ယူလိုက်သောပစ္စည်းတစ်ခုစီသည် volume ကိုရယူပါ3တန်ချိန်, မှိုငွေပေးချေမှုပြန်အမ်း
Delivery time Sample with 15 ရက်ပေါင်း; Decent order with 15-30 ရက်ပေါင်း
ငွေပေးချေမှုသက်တမ်း 30% အပ်ငွေ, the balance pay against shippment (EXW); Or 30% အပ်ငွေ, the balance pay against B/L copy within7ရက်ပေါင်း
ထုပ်ပိုးစံ Protected film and pearl cotton inside and shrink film outside
နမူနာ အခမဲ့နမူနာ ( အောက်အလေးချိန်2ကီလိုဂရမ်) တောင်းဆိုမှုအပေါ်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်
အာမခံသက်တမ်း အဆိုပါတင်ပို့ထုတ်ကုန်လိုအပ်သောတွေ့ဆုံရန်မနိုင်လျှင်, စုစုပေါင်းအမှာစာငွေပမာဏကိုနှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲပြန်အမ်းလိမ့်မည်, သို့မဟုတ်အစားထိုးအသစ်သောပစ္စည်းများကိုစီစဉ်ပါ
Changyuan Aluminum ရှိဂဟေဆော်ခြင်းနှင့်အတူလူမီနီယံခြံစည်းရိုး / ရထားလမ်း၏အားသာချက်များ:
1.အလေးချိန်ပေါ့: ၎င်း၏အလေးချိန်သည်သံ၏သုံးပုံတစ်ပုံမျှသာရှိသည်, သံမဏိ, နှင့်ကြေးနီ, ဒါပေမယ့်၎င်း၏ခိုင်မာသောသူတို့ထဲကအကြိမ်ပေါင်းများစွာဖြစ်ပါတယ်. ပေါ့ပါးသောလူမီနီယံအလွိုင်းလသာဆောင်ခြံစည်းရိုးသည်ကိုင်တွယ်ရန်လွယ်ကူသည်မဟုတ်ပါ, ဒါပေမယ့်လည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှစျေးနှုန်းချိုသာ. ၎င်းကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လက်ခံသည်. စီးပွားဖြစ်ဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းမှကြိုဆိုပါသည်.
2.မာကျော: Aluminum Profiles များ၏မာကျောမှုသည်ဆန့်ခြင်းနှင့်ကြီးမားသောသက်ရောက်မှုစွမ်းအားများကိုခုခံနိုင်သည်, နှင့်၎င်း၏ခံနိုင်ရည်သည်အခြားရိုးရာဆောက်လုပ်ရေးပစ္စည်းများထက်သာ။ ကောင်း၏.
3.ချေးခံနိုင်ရည်ရှိသည်: အလူမီနီယမ်အလွိုင်းလသာဆောင်ပြောင်လက်၏မျက်နှာပြင်ကိုမာကျောသောအလူမီနီယမ်အောက်ဆိုဒ်အဖုံးနှင့်တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ထားသည်, ထို့နောက်ထိုကဲ့သို့သောဆေးသုတ်သို့မဟုတ် anodization အဖြစ်မျက်နှာပြင်ကုသမှုအကြောင်းမဲ့, အရာနောက်ထပ်ယင်း၏အကာအကွယ်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုခိုင်ခံ့စေနိုင်သည်, ဒါကြောင့်အလွန်တောက်ပသည်. ထို့ကြောင့်, လေထုညစ်ညမ်းနေသောမြို့သို့မဟုတ်ပင်လယ်ဆားငန်ကမ်းရိုးတန်းinရိယာတွင်ကိစ္စမရှိပါ, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏စိုးရိမ်မှုများကိုဖြေရှင်းရန်၎င်းကိုစိတ်ငြိမ်းချမ်းစွာဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်.
4.လွယ်ကူစွာတပ်ဆင်နိုင်သည်: ၎င်းသည် plug-in ထည့်သွင်းတပ်ဆင်သည်, အရာရိုးရှင်းပြီးအစာရှောင်သည်, နှင့်ခိုင်မြဲစွာ fixed, အရာကိုအလွန်တပ်ဆင်ထိရောက်မှုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေသည်.
5. လှပသောအသွင်အပြင်: အရောင်အမျိုးမျိုး, အားကြီးသောအလှဆင်, ကောင်းသောချောမွေ့, အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရောင်နှင့် texture, အခြားပစ္စည်း guardrails နှင့်အတူပေါင်းစပ်အသုံးပြုနိုင်သည်, ထိပ်ရထားလမ်း၏ကွေးအစိတ်အပိုင်းသည်တောင်တက်ခြင်းကိုတားဆီးနိုင်သည်, Anti- ခိုးမှုအကျိုးသက်ရောက်မှုသိသာသည်.
အတွင်းပိုင်းနှင့်ပြင်ပလှေကားများအတွက်သင့်တော်သည်, လသာဆောင်များ, ကြမ်းပြင်မှမျက်နှာကျက်ပြတင်းပေါက်များ, စက်လှေကားအဖွင့်, ဖန်ကုလားကာနံရံပြူခင်းနှင့်ပလက်ဖောင်း, မြို့ပြစင်္ကြံနှင့်စက်မှုအဆောက်အ ဦး Guardrails, စသည်တို့.
Guangdong ရှိထုတ်လုပ်မှုအခြေစိုက်စခန်း ၂ ခု.
အမှတ်အသားများ (Tags)：လူမီနီယံခြံစည်းရိုး, ဂဟေနှင့်အတူလူမီနီယမ်ခြံစည်းရိုး, လူမီနီယမ်ခြံစည်းရိုးထုတ်ကုန်, လူမီနီယမ်ခြံစည်းရိုးထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သူ, ဂဟေနှင့်အတူလူမီနီယမ်ခြံစည်းရိုးရထား, လူမီနီယမ်ခြံစည်းရိုးကိုဝယ်ကြလော့